"Toy izay anie ianao mba nihaino ny didiko ! Dia ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao, ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao." Isaia 48:18
"(Hoy Jesosy:) Na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia hoharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy." Matio 7:24
Nisy taratasy misy toromarika nampiarahina tamin'ireo zana-kazo novidiko, manome ahy ireo torohevitra tsy maintsy arahina mba hampaniry tsara ny hazo amboleko. Misy soratra vaventy milaza hoe: "Vakìna tsara ary ampiharina".
Torohevitra toy izany koa no azo atolotra ny olona izay mamaky ny Baiboly. Ny famakiana azy dia tsy tokony ho toy ny famaky boky hafa, fa amin'ny maha Boky itenenan'Andriamanitra amintsika azy. Ny Baiboly dia tsy boky ara-tantara, na manambara zavatra noforonin'ny eritreritra, ary indrindra moa, tsy boky-na filôzôfia. Mamelatra ny drafitr'Andriamanitra mikasika ny zanak'olombelona izy. Jesosy Kristy, Ilay Zanak'Andriamanitra, no ivon'izany. Naneho ny heriny Izy tamin'ny namoronany izao rehetra izao, ary naneho ny hatsaram-pony tamin'ny nahatongavan'Izy tenany mihitsy tety; an-tany, mba hamonjy ny olombelona latsaka tao anaty ota. Manazava ihany koa izay tokony hataon'ny olombelona, mba hankasitrahin'Andriamanitra: miaiky ny fahotany sy mandray ny fahasoavan'ny famelan-keloka. "Fa raha misy mpihaino ny teny, nefa tsy mpankatò, dia toy ny olona mizaha ny tarehiny eo amin'ny fitaratra izy; fa mijery ny tenany izy, dia lasa, ary miaraka amin'izay dia hadinony ny tarehiny" (Jakoba 1:23-24).
Mandritra ny fiainantsika amin'ny maha kristiana antsika, dia zava-dehibe koa ny mampifanaraka ny fitondrantenantsika amin'ny fampianaran'ny Tenin'Andriamanitra. Tia antsika Ilay Raintsika, ary mahafantatra izay tsara ho antsika. "Tsy mavesatra ny didiny" (1 Jaona 5:3). Andeha hianatra hivavaka toy ny mpanao salamo, hoe: "Velomy aho araka ny teninao... Ampandehano amin'ny làlan'ny didinao aho" (Salamo 119:25, 35).